Black Panther မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Black က Panther
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 30 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 98 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 110 Views စာ0မှတ်ချက် Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 124 Views စာ0မှတ်ချက် အဲဖရက်, Alfred Pennyworth, အန်ဒီ Serkis, Black က Panther, Gollum, Lego, Lego မှ marvel, lego minifigure, Lego Minifigures, Lego Star Wars, လက်စွပ်၏သခင်ဘုရား Lego, Marvel, Marvel စတူဒီယို, အသေးစား, သေးသေးလေး, Snoke, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, အဓိပတိခေါင်းဆောင် Snoke, နောက်ဆုံး Jedi, လက်စွပ်၏သခင်, Ulysses Klaue
Lego အသစ် Marvel ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် Wolverine minifigure
06 / 10 / 2021 06 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 182 Views စာ0မှတ်ချက် 6866 Wolverine ရဲ့ Chopper Showdown, အဆိုပါ Sentinel vs. 76022 X-Men, 76073 Mighty Micros: Wolverine နှင့် Magneto, 76169 Thor Mech သံချပ်ကာ, Black က Panther, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, MarvelWolverine ရဲ့, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Wolverine, X-Men
LEGO အတွက်နောက်ထပ်ကောလာဟလများ Marvel ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာသော Wolverine ဗားရှင်းအသစ်သည်ပေါ်ထွက်လာသည်
18 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 131 Views စာ 1 မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76100 တော်ဝင် Talon တိုက်လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Black က Panther, အုတ်ခဲ, Killmonger တဲ့, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 260 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, Yondu
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 195 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, ကပ္ပတိန် Marvel, သံမဏိလူသား, သံမဏိart, ကီဗင် Feige, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာရက်ဘို, အဆိုပါ Marvels, တိုနီ Stark